Taunggyi - The Cherry Land: အေးချက်ကတော့
အဆောင်မှာ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး ဘယ်သူ့မြို့ ပိုအေးသလဲဆိုတာပြောရင်း အင်းသားအစ်ကိုကြီးက သူ့တောင်ကြီးအေးပုံကို အော်ပြောသွားပါတယ်။
မင်းတို့ မြို့တွေတော့ မသိဘူး...ငတို့ တောင်ကြီးမတော့ ဆောင်းတွင်းဆို လမ်းဘေးသေးပေါက်ရင် ခြေထောက်တစ်ချောင်းက သေးချောင်းကို အမြဲကန်ချိုးနေရတယ်..
အဆောင်တွင် ကုတင်ကျိုးအောင် ရယ်မောခဲ့ရသော နေ့များအား သတိရလျက်...
မြန်မာကျူးပစ် ဟာသ များထဲမှ ကို nail ၏ ပိုစ့်ကို ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ရေးသားသူ နေလင်း အချိန် 6:10:00 PM
ပင်လောင်းထက် တီကျစ် က
Wednesday, February 11, 2009 6:26:00 PM
တောင်ကြီးက ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် အမြင့်ပေ ၄၇၁၂အမြင့်မှာရှိပေမယ့် ဆောင်းတွင်းမှာ တကယ်အေးပြီဆိုရင် ကလောမြို့က ပိုအေးတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်... ဒါပေမယ့် တောင်ကြီးလဲ တကယ်အေးတာပါပဲဗျာ... ပြောရင်းနဲ့ ပြန်ချင်လာပြီဗျာ.... (တောင်ကြီးသားမို့ ငယ်ငယ်က လူကြီးတွေပြောတာကို ပြန်ပြောပြတာပါ... ဟုတ်လားတော့သိဘူး... ဟီးဟီး)
Thursday, February 12, 2009 1:49:00 AM
အေးတာချင်းတူတယ် ပြောမနေနဲ့ အေးရင် ယမကာလေးနဲ့ ညိမ့်နေတာပဲ အဟဲ ပြောရဲပါတယ် တောင်ကြီးသားမှန်ရင် ယမကာမှီဝဲတတ်ပါတယ် ရင်ထဲကိုပူဆင်းသွားတာလေးကိုကတစ်မျိုးလေးဗျ ပြောရင်းသတိရလာပြီ မနက်ကို တိုဖူးနွေးလေးနဲ့ 
့အီကြာကွေးလည်းပါသေး တောင်ကြီးကိုလွမ်းတာတော့ အားလုံးပဲ လွမ်းပါတယ် ဒါပဲပြောတော့ဘူးရယ့်
Saturday, February 14, 2009 3:01:00 AM
ဟမ် .:O .. တိုဖူးနွေးအကြောင်း ပါလာတယ်။ ၀င်ပြီး Comment ပေးမယ်ဗျာ :P .. ။ တိုဖူးနွေးလေး လွမ်းတယ်ဗျာ .. မင်္ဂလာဦးက .. (~_~) မစားရတာ ကြာပြီဆိုတော့ ၀င်ပြီးအလွမ်း သည်လိုက်ပါအုံးမယ် . ... :P .. ။ အီကြာကွေးနဲ့တော့ ရောစားဖူးဘူး .. ၀က်ခေါက်လေးနဲ့ .. ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ .. :( အဟင့် ... ။
မင်္ဂလာဦးက တိုဖူးနွေးရေ .. :P
အာ r rr r ဘွား .. :*) ..
ဆိုင်ရှင်ကို ဟုတ်ဖူးနော် :P
Wednesday, April 01, 2009 6:13:00 AM
ရန်ကုန်သူတစ်ယောက် တောင်ကြီးဆောင်းတွင်းမှာ စကပ်တိုတိုဝတ်ပြီး မြစိမ်းတောင်သွားမိတယ်...
နောက်နေ့ကျတော့ အမှတ်မရှိပဲ အကျီင်္လက်ပြတ်နဲ့ မြို့မဈေးကို ထပ်သွားပြန်တယ်...
Thursday, April 09, 2009 6:47:00 AM
ပင်လောင်းပိုအေးမယ်ထင်ပါတယ်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ၁၈၀၀ မှာ တည်ရှိသလို ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် တောင်တွေကြားရောက်နေလို့ ရှမ်းတောင်မှာ ပင်လောင်းမြို့က အအေးဆုံးလို့ ကြားဖူးပါတယ်။ :)
Monday, April 13, 2009 2:07:00 AM
Sunday, June 20, 2010 7:57:00 PM
Monday, June 28, 2010 1:10:00 PM
Monday, June 28, 2010 5:50:00 PM
Sunday, July 04, 2010 5:36:00 PM
Sunday, July 04, 2010 11:43:00 PM
Monday, July 05, 2010 2:57:00 AM
Wednesday, July 07, 2010 3:42:00 PM
Friday, July 09, 2010 9:45:00 AM
Friday, July 09, 2010 1:32:00 PM
Friday, July 09, 2010 4:21:00 PM
Friday, July 16, 2010 8:58:00 AM
Monday, February 11, 2013 9:41:00 AM
Thursday, July 02, 2015 2:19:00 PM
Wednesday, September 23, 2015 8:09:00 AM
Friday, October 09, 2015 1:31:00 PM
Tuesday, December 08, 2015 7:48:00 AM
Saturday, January 09, 2016 12:32:00 PM
Monday, July 25, 2016 3:28:00 PM
Friday, November 04, 2016 8:30:00 PM
Saturday, March 04, 2017 2:50:00 PM
Tuesday, April 10, 2018 6:39:00 AM
Saturday, December 29, 2018 3:47:00 PM